eHimalayatimes | अर्थ / कर्पोरेट | सरकारबाटै आयातमा प्रोत्साहन !
16th December | 2018 | Sunday | 6:10:16 PM
सरकारबाटै आयातमा प्रोत्साहन !
POSTED ON : Thursday, 08 March, 2018 (12:44:30 PM)
मत्स्य क्षेत्र प्रवद्र्धनको सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । सरकारी सहयोग वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीको मिलेमतोमा उनीहरूका आफन्त र पोखरीमा नभई कागजी रूपमा मात्र माछापालन गर्ने किसानलेमात्र पाउने गरेको अवस्था छ । कतिपय त्यस्ता नक्कली किसानविरुद्ध हामीले सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत हालेका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन ।
सरकारको यस्तै रबैयाले गर्दा वास्तविक किसानमा एकदमै निराशा बढेर गएको छ । विदेशबाट फर्किर यो व्यवसायमा लागेका युवाहरू पुनः विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । मत्स्य नीति अझै बन्न सकेको छैन, अरू सबैका विषयका नीति छन् तर मत्स्य नीति छैन । मत्स्य नीतिको मस्यौदा वर्षौदेखि कृषि विकास मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । नेपाली किसानलाई कुनै प्रोत्साहन छैन, सरकारले आयातलाई मात्रै प्रोत्साहित गरिरहेको छ । फर्मालिन हालेका ट्रकका ट्रक भारतीय माछा दैनिक नेपालमा निर्वाधरूपमा भित्रिरहेका छन्, तर नेपालमै उत्पादित जिउँदा माछा ढुवानीमा भने प्रहरी अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेर दुःख दिइरहेको छ । प्रहरी भन्छ– जिउँदो माछा पानीमा हालेर किन ल्याएको ?
जिउँदो माछा पानीमा राखेर नल्याए, केमा राखेर ल्याउने ? दैनिक यस्तै झन्झटको समाना गर्नु परिहेको छ । प्रहरीलाई घुस दिनुपर्छ, नत्र अनेक बहानावाजी बनाएर गाडी रोकिदिन्छ । यसबारेमा हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छौँ तर कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्य मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । सरकार एकातिर आत्मनिर्भरको कुरा गर्छ, अर्कातिर माछा किसानलाई सहयोग होइन, निरुत्साहितमात्रै बनाउँछ । अब हामीसँग एउटै विकल्प बाँकी छ, सडकमा उत्रिने । तर पनि नयाँ सरकारले केही गर्छ कि हेरौं ।